AL-QUDUS ONLINE ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎
Machadka AL-QUDUS ONLINE waxuu dhamaan bulsho waynta Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah ugu buushaaraynayaa inuu kuu soo kordhiyay hab cusub oo ONLINE ah (Maqal iyo Muuqaal) oo aad QUR’AANKA KARIIMKA iyo CULUUMTA DIINTA ISLAAMKA ah ku dhigan karto adigoo jooga Gurigaaga iyo Xafiiskaaga. Caruur Iyo Waalidba way dhigan karaan Machadka Goor kasta iyo Goob kasta ood joogto. Waxaa kaloo machadka aad ka helaysaa barashada Luqada Carabiga, Somaliga, Axaadiista, Tajwiidka, Siirada Nabiga (SCW) iyo dhamaan Culuumta Barashada Diinta Islaamka. Machadka waxaa diyaar kuugu ah Macalimiin Soomali ah oo Aqoon iyo Khibrad sare u leh dhigista Quraanka Kariimka iyo Culuumta Diinta islaamka. Machadku waxa uu siinayaa ardayda cusub tijaabo sadex maalmood ah oo lacag la'aan ah si uu ugu qanco waalidku. machadka waxa uu bishan qaadanayaa arday isugu jirto Bilow, Dhexdhexaad Iyo Dhamaystir intaba waxbarashadii loo safri jiray ayaa guriga kugu timid waa fursad qaali ah! Machadkan waxaa loogu tala galay Walaalada Soomaaliyeed ee Qurbo Jooga ah. FADLAN WIXII FAAHFAAHIN DHEERAADA WAXAAD NAGALA SOO XIDHIIDHI KARTAA:
Machadka AL QUDUS ONLINE ACADEMY waxuu dhamaan bulsho waynta Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka ugu buushaaraynaysaa inuu kuu soo kordhiyay hab cusub oo ONLINE ah (Maqal iyo Muuqaal) oo aad QUR’AANKA KARIIMKA iyo CULUUMTA DIINTA ISLAAMKA ah ku dhigan karto adigoo jooga Gurigaaga iyo Xafiiskaaga................